Nazi ezona ziqonga zibalaseleyo zokufunda kwi-intanethi onokuthi ufunde kuzo kwaye ufumane izatifikethi kuzo. Ezinye zezi ziqonga zokufunda kwi-Intanethi zisimahla, ezinye ziyahlawulwa, ezinye zineenkqubo zasimahla nezihlawulelwayo.
Enkosi kwi-intanethi nakwizixhobo ze-IoT ungafunda ikhosi, izakhono ezibalulekileyo kunye nobuchule kwi-intanethi ngekhompyuter okanye ilaptop, uqhagamshelo lwe-intanethi kwaye ewe ewe, ikomityi yekofu, iglasi yewayini kunye nesofa zinokongezwa kolo luhlu .
Eli nqaku liza kubonisa amaqonga okufunda afanelekileyo kwi-Intanethi ukuze uqalise ngokufunda ikhosi, ufumane isidanga, ufunde isakhono esiluncedo okanye ubuchule kwi-intanethi.
Ngenxa yobhubhane we-COVID-19 oqhubekayo, kuye kwaqaliswa ukukhusela ukuthintela ukusasazeka kunye nosuleleko losuleleko lweevenkile ezinkulu zeentengiso, izikolo kunye nezinye iindawo zikawonke-wonke zivaliwe kodwa usenayo ikhompyuter / ilaptop kunye nonxibelelwano lwe-intanethi kwaye fezekisa yonke into ngezi zinto.
Ukuya kwiiklasi kula maxesha ayisiyonto unokukhetha kuyo ngenxa yokutshixwa kwento kufuneka ube nexesha elikhululekile ezandleni zakho kwaye eli lixesha elifanelekileyo njengayo nayiphi na into yokufunda into enemveliso. Kodwa ufunda njani kuba awukwazi ukuya eklasini? Kulula, unekhompyuter okanye ilaptop kunye nonxibelelwano lwe-intanethi emva koko ulungile.
Ukufunda nge-Intanethi kukuphuculwa kwemfundo yesiqhelo esiyaziyo njengoko inezibonelelo ezingcono kunendlela eqhelekileyo yokufunda.
1 Izibonelelo zokufunda kwi-Intanethi
2 Amaqonga okuFunda kwi-Intanethi (Awona maQonga amaNgcono okuFunda kwi-Intanethi)
2.1 IQonga lokuFunda kwi-Intanethi kwi-UDEMY
2.2 TUTORROOM Iqonga lokuFunda kwi-Intanethi
2.3 Iqonga lokuFunda kwi-Intanethi
2.4 Iqonga le-COURSERA kwi-Intanethi
2.5 I-KHAN ACADEMY Iqonga lokuFunda kwi-Intanethi
2.6 I-ALISON kwiQonga lokuFunda kwi-Intanethi
2.7 Iqonga lokuFunda le-edX kwi-Intanethi
2.8 CODEACADEMY Iqonga lokuFunda kwi-Intanethi
2.9 I-STANFORD Iqonga lokuFunda kwi-Intanethi
Kuyinto elula kuba ufunda ngesantya sakho, xa uthanda, naphi na apho ukhoyo.
Ukukhawuleza ukugqiba. Ukuba ufunda kwi-Intanethi ukuze ufumane isidanga esikufumanayo ngokukhawuleza kodwa kuxhomekeke ekubeni uzimisele kangakanani na.
Yeyona ikwiklasi esebenzayo kunye neklasi engasebenziyo. Usenokuba uyasebenza kwaye uthathe isigqibo sokuphucula ulwazi lwakho okanye izakhono zokufumana unyuselo okanye ukuqala ikhondo elitsha lomsebenzi, ukufunda kwi-Intanethi lelona khondo lilungileyo onokulithatha.
Ukonwabela ukubonelelwa kwexesha le-intanethi.
Ngaphambi kokuba uqale nayiphi na indlela yokufunda kwi-intanethi okanye ngendlela eqhelekileyo, iziko okanye indawo yokufunda apho isifundo senziwe khona sifuneka kakhulu. Kuya kufuneka ukuba uye kwisikolo esithile ukuze ufunde into oyifunayo kodwa kuqala, kufuneka uzazi ezi zikolo kwaye uqalise ukukhetha kwakho ukusuka apho, oku kuyasetyenziswa nakwisifundo se-Intanethi.
Kwisifundo se-Intanethi, kukho amaqonga akhethekileyo okufunda apho, ewe, ufunda into oyifunayo kwaye zininzi zezi ziqonga zokufunda ezikwi-intanethi kodwa emva kophando olunzulu nolubanzi ndizisa kuwe amaqonga ama-9 okufunda kwi-Intanethi ukuze ukhethe kwaye uqale ukufunda.
Amaqonga okuFunda kwi-Intanethi
(Iiplatifomu zokuFunda eziBalaseleyo kwi-Intanethi)
IQonga lokuFunda kwi-Intanethi kwi-UDEMY
Udemy lelona qonga likhulu lokufunda kwi-intanethi nezigidi zabasebenzisi abasebenzisa iinkonzo zalo ukuze bafunde ikhosi okanye ubuchule ababukhethayo. Udemy unikezela uluhlu olubanzi lwezifundo zabafundi abanokukhetha kuzo ezinikezelwa ngabahlohli ababalaseleyo kuzo zonke iimbombo zomhlaba.
Kufanelekile ukuba uqaphele ukuba i-Udemy liqonga lokufunda lasimahla kwi-Intanethi nangona ngoku zikho iikhosi ezininzi ezihlawulelwayo eqongeni ezinezatifikethi zokugqitywa.
I-Udemy inamawaka ezixhobo zokufunda, iikhosi kunye neenkqubo kwaye ibonile amawaka abafundi abavela kwihlabathi liphela ukuba baxhamle kwizifundo zayo.
Ukuba ufuna ukukhusela izifundiswa phesheya, zininzi izifundo ezikhoyo kweli qonga elinceda abafundi bamazwe aphesheya ukuba bakhusele izifundiswa ezinkulu zokufunda phesheya. Ungacofa apha ukuze uthathe inxaxheba nakwezinye zezi zifundo.
TUTORROOM Iqonga lokuFunda kwi-Intanethi
Igumbi lokufundela Ikwindawo ephambili yokufunda kwi-intanethi enezicelo zasimahla zabafundi kwihlabathi liphela.
Eli qonga liyaziwa ngeklasi yalo esemgangathweni enezinto ezizodwa ezinjengevidiyo kunye nemiyalezo emanyelwayo, evumela ukulayishwa kweefayile zePDF kunye nenkqubo yolawulo lokufunda eya kukunceda ucwangcise iiklasi zakho kunye nokwenza iiakhawunti zabafundi.
Igumbi lokufundisa lixhasa imibutho yezemfundo ukwakha iiklasi ezibonakalayo kwi-intanethi, ukubonelela ngezifundo ezikwi-Intanethi kwaye abafundi bahlawulele iinkqubo zabo kwi-intanethi.
Isoftware esetyenzisiweyo ekuphuhliseni I-RCAMPUS iqonga lokufunda kwi-Intanethi lahlukile. Abafundi nabahlohli bayakwazi ukubamba incoko ubuso ngobuso, ivumela ootitshala ukuba balayishe ngokulula izixhobo zokufunda zabafundi kwaye ikwanento eyaziwa ngokuba yi "ePortfolio Management System" enokusetyenziselwa ukubonisa izakhono zabafundi kunye nophuhliso lomsebenzi.
Iqonga libanga ukuba yiNkqubo yokuLawulwa kokuFunda yokuQala ngeeRubrikhi ezakhiweyo. Kulapho abafundi abafunda ngokwamaqela okanye kwiiklasi banokuthi bonke badibane ukuze basebenzisane.
Njengelinye lamaqonga okufunda akwi-Intanethi, i-RCampus iphendula kakhulu ngokujongana nomsebenzi olungileyo kwaye inokugcina amaziko abafundi abamalunga ne-1000 ukuba babonelele ngezifundo zabo kwi-intanethi ngeqonga bonke abafundi ababhalisiweyo nabathatha inxaxheba.
Iqonga le-COURSERA kwi-Intanethi
Eli liqonga lokufunda elaziwa kakhulu kwi-Intanethi elinamaqabane neeyunivesithi kunye nemibutho kwihlabathi liphela ukuzisa uluhlu olubanzi lwezifundo, izakhono kwindawo enye enokukhangelwa.
Coursera Ngomnye wabanikezeli abakhokelayo beekhosi ezivulekileyo kwi-Intanethi (ii-MOOCs) ke ngoko zibonelela ngabona bahlohli babalaseleyo ekufundiseni abafundi kwizakhono zokufuna kunye nezifundo zasimahla.
Ngelixa ungajoyina iqonga le-Coursera simahla njengomfundi, uninzi lwezifundo zabo ziyahlawulwa. Ezo simahla zinokufuna umrhumo othile ukuba ufuna ukufumana isatifikethi wakugqiba.
I-Coursera ibalwa njengelinye lawona maqonga okufunda akwi-Intanethi kwihlabathi. Iqonga libambisene ne-200 + ekhokelayo kwiiyunivesithi kunye neenkampani kwihlabathi ukubonelela ngeenkqubo eziphezulu ze-intanethi.
Iinkampani ezinje ngeGoogle, Illinois kunye nezikolo ezinjengeDuke University, iPenn, Imperial College, iStanford kunye nenani leeyunivesithi ezinkulu emhlabeni zibonelela ngeenkqubo ze-Intanethi kunye nezifundo ngeli qonga. Xa kufikwa kwintsebenzo ephezulu, iklasi kunye nentsebenziswano esemgangathweni, iCursera lelona qonga lifanelekileyo lokufunda online kwihlabathi.
Uninzi lwezifundo zethu Uluhlu lwezifundo zasimahla kwi-Intanethi eCanada zinikezelwa kweli qonga.
I-KHAN ACADEMY Iqonga lokuFunda kwi-Intanethi
Khan Academy abalingane bezikolo ezininzi ezisekondari kwaye babonelela ngolwazi olwahlukileyo olunzulu ngabafundi kwizifundo ezahlukeneyo.
Iqonga linonxibelelwano oluhle lomsebenzisi nto leyo ethetha ukuba kulula ukuyisebenzisa nokuba yeyokuqala-ixesha apho unokufumana khona indlela kwaye yonke into icwangciswe kakuhle ukuze ungabhideki.
Ukujoyina eli qonga lokufunda kwi-intanethi simahla kodwa kungafuneka ubhatalele ezinye zeekhosi ezibonelelwa ngamaziko emfundo eqongeni
I-ALISON kwiQonga lokuFunda kwi-Intanethi
alison iphakathi kwamaqonga okufunda akwi-intanethi kwi-intanethi njengoko ibonelela ngezifundo zekharityhulam yesikolo kwaye unokufuna isatifikethi sokugqitywa.
Ukuba njengomfundi ufuna ukufunda ikhosi kwi-Intanethi kwiTekhnoloji, kwiShishini okanye kwi-Alison yezeMpilo kunokuba kufanelekile ukuba uyihlole.
Zininzi izifundo ezenziwa ngexesha elinye kwi-intanethi eqongeni onokuthi uthathe inxaxheba kuyo kwaye unokufumana nesatifikethi sediploma kwiinkalo ezahlukeneyo zokufunda eqongeni.
Uninzi lwabafundi luyatshintsha inzala yokufumana izatifikethi zabo zesidanga kwi-intanethi. Ungajonga isikhokelo sethu Ungasifumana njani isidanga se-bachelor kwi-intanethi ngokukhawuleza kakhulu.
Iqonga lokuFunda le-edX kwi-Intanethi
Ngaba uyafuna amava emfundo yasimahla kwi-Intanethi? Iqonga le-edX inokuba liqonga elililo lokusebenzisa. Inika iikhosi ezigqityiweyo ezikwi-Intanethi ezibandakanya ootitshala, iibhodi zeengxoxo, iikhwizi, njl.
Ukuba ujolise ekufundeni ikhosi kwiMathematika, iSayensi kunye nezoBunjineli emva koko i-edX inokuba yeyona ndawo ilungileyo kuwe njengoko iqokelela ezi zifundo zikhethekileyo kwizikolo ezahlukeneyo. Izatifikethi ziyafumaneka nasekupheleni kwekhosi nganye eqongeni.
CODEACADEMY Iqonga lokuFunda kwi-Intanethi
Ikhowudi inenqaku apho unokukwazi khona ukubeka iliso kwinkqubela phambili yakho kunye nokucwangcisa izifundo kwiimodyuli ezipheleleyo.
I-STANFORD Iqonga lokuFunda kwi-Intanethi
STANFORD-Kwi-Intanethi lulwandiso lwe-intanethi lweDyunivesithi yaseStanford kwaye ibonelela ngazo zonke izifundo ezinikezelwa yiyunivesithi. Ukuba ujonge ukuba ufunde phi kwinto elungileyo mfundisi, eli qonga libonelela ngeentlobo ngeentlobo zezifundo zabafundi ezifundiswa abona bahlohli babalaseleyo baseStanford.
Nangona iYunivesithi yaseStanford ibonelela ngezifundo ezikwi-Intanethi kwiqonga le-Coursera, iStanford kwi-intanethi liqonga lokufunda elikwi-intanethi elidibanisa zonke iikhosi ezibonelelwa yiyunivesithi online kubafundi bamanye amazwe nabasekhaya.
QAPHELA: Onke amaqonga adweliswe apha asimahla ukuba afakwe. Into ekufuneka uyenzile kukuvula indawo kwaye ungene kunye neemfuno eziyimfuneko.
Ezi ziqonga zokufunda kwi-Intanethi zithathwa njengezona zibalaseleyo kwezona ndawo zidumileyo zokufunda kwi-Intanethi. Ngokubanzi, kukho iwaka elinye lamaqonga okufunda kwi-Intanethi ngaphandle, amanye asekwe ziiyunivesithi eziphambili ezinje ngeOxford kunye neenkampani eziphambili ezinje ngeGoogle kunye namaqonga okufunda kwezentlalo afana neLinkedInn.
Olu luhlu alwenzelwe ukuba lonakalise amanye amaqonga okufunda aphezulu kodwa kukukhanyisa kwezi zimbalwa phakathi kwezona ndawo zidumileyo. Zininzi ezinye iiplatifomu ezilungileyo zokufunda ezikwi-Intanethi ngaphandle ezingathandwayo kubasebenzisi abambalwa.
Ikhonkco elixhasiweyo funda kwi-intanethi
Amaqonga okufunda akwi-IntanethiIiplatifomu eziPhambili zokuFunda kwi-Intanethi ezinesicelo sasimahlaiqonga lokufunda simahla kwi-Intanethiukufunda kwi-intanethiamaqonga okufunda onlineiiwebhusayithi zokufunda kwi-Intanethiiindawo zokufunda kwi-intanethiamaqonga okufunda aphezulu kwi-Intanethiapho ukufunda kwi-intanethi
Post Previous:Iindawo ezili-15 zokufumana uvavanyo lwesiNgesi ngeempendulo zePDF
Novemba 16, 2021 kwi-5: 20 pm
Akukho khonkco lekhosi ye-intanethi yasimahla apha. Kuphela iitoni zezincoko ezichitha ixesha lakho lokufunda.
Pingback: Izibonelelo ezi-5 eziphambili zokusebenzisa iVidiyo kwiMfundo 2021
Epreli 27, 2021 kwi-12: 29 pm